Artin culin Macrobiotic, mgbanwe ndu - Afrikhepri Fondation
Fraịdee, Jenụwarị 15, 2021
Ihe omuma nke Macrobiotic, mgbanwe ndu
Na-agụ: 12 min
AN'iji macrobiotic culinary art na ufodu iwu di mfe nke ndu, enwere ike ime ihe doro anya banyere oru di nkpa nke aru mmadu:
• Nchịkwa izugbe
• Imeghari ọbara na akụkụ.
• Nnukwu mmụba nke ahụike
• Ngwọta zuru oke nke ọrịa ahụ n'ọnọdụ ụfọdụ.
• Ịzụlite na ịzụlite ọkwa nke nsụhọ
Mgbe oge ụfọdụ dị oke omume, ikpe, psyche na arụmụrụ na-arụ ọrụ (ebe nchekwa, ọgụgụ isi) ga-adịkwu elu ruo ọkwa ha kachasị elu. Macrobiotics bụ ihe eji eme ihe nke iwu zuru ụwa ọnụ (Taoist dialectic) na iwu ndị nna ochie gbasara Nature, nke nwoke oge a chefuru. Maka ndị na-amatabeghị ya, macrobiotics, site na Greek macro = nnukwu na biotic = ụkpụrụ dị mkpa, bụ ntinye dị irè nke ụkpụrụ nkà ihe ọmụma, olu asụsụ ụwa niile, yana ụfọdụ iwu ọgụgụ isi na ọdịnala ama ama.
Nchịkọta nke usoro iwu ndị a kemgbe narị afọ iri emewo ka arụpụta ihe dị mma ma dị mma nke ọdịmma na ogologo ndụ.
Ihe ndi mmadu ji ebi ndu bu ihe magburu onwe ya nke ihe omuma site na nchoputa na akọnuche nke ndi mara ihe, nke emere ka odi nma nke ndi mmadu na onye m nwere otutu ihe m ga-egosi gi.
Ọrụ ebube, scandalous, nsogbu, na-elekọta, rejuvenating, inoperative, hermetic, esoteric, omimi. Ihe niile na ndị ọzọ.
Ihe ekwuru maka macrobiotics, ụdị ndụ a siri ike, nke nwere mgbọrọgwụ na oge, anaghị enwe ekele maka uru ọ bara.
Maka ndị niile jụrụ ajụ, enwere ụzọ, usoro, nkà ihe ọmụma ma ọ bụ nkuzi, ihe ọ bụla aha onye ọ bụla gụrụ ya, n'ọnọdụ ọ bụla ọ bụ usoro dị adị ma dị irè, anyị na-akpọ ya macrobiotic. , na ọ bụ nkà nke ibi ndụ nke na-eme ka ọnọdụ mmadụ ka mma ma na-enye ezi nnwere onwe site na ịmara isi iwu kachasị elu ụwa.
Nkowa nke macrobiotics dika Georges Ohsawa kwuru
Macrobiotics abụghị ọgwụ gbara ọkpụrụkpụ sitere na mmalite ewu ewu, ma ọ bụ ọgwụ dị omimi ma ọ bụ nke e chere na ọ bụ ọgwụ sayensị na ọgwụgwọ, kama ọ bụ itinye ya n'ọrụ na ndụ kwa ụbọchị, nke ụkpụrụ nke nkà ihe ọmụma ọwụwa anyanwụ. Ọ bụ itinye ntụgharị uche nke echiche ụwa niile, afọ 5.000 na nke gosipụtara ụzọ esi enwe obi ụtọ site na ahụike. Zọ a ghere oghe nye mmadụ nile, ọgaranya ma ọ bụ ogbenye, ndị gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị na-amaghị. Ọ dị mfe ma ndị niile ji obi ha niile chọọ ịtọhapụ onwe ha na isi ike ma ọ bụ isi ike mmụọ nwere ike ịgbaso ya na ndụ ha kwa ụbọchị. Ọtụtụ nde ụmụ nwoke nọ na East East ebutewo ndụ obi ụtọ na nnwere onwe, nwee udo na ọdịbendị ruo ọtụtụ puku afọ, n'ihi nkuzi nke macrobiotic nke Lao-Tse, Abụ-Tseu, Confucius, Buddha, Mahavira, Nagarjuna… na, ogologo oge tupu ha, ndị amamihe mepụtara sayensị sayensị nke India. Ozizi ndị a emewo agadi ugbu a, n’ihi na ihe ọ bụla nwere mmalite nwere ọgwụgwụ. Ha ebuwo ibu na nkwenkwe ụgha, mysticism na usoro ọkachamara; ọ bụ ya mere anyị ji nye gị nkọwa ọhụụ. »O doro anya na Georges Ohsawa sitere n'ike mmụọ nsọ nke ihe odide nke Hufeland nke atụgharịrị n'asụsụ Japanese, iji mepee ọhụụ ọhụụ nke ibi ndụ, rụọ ọrụ nke ọma enwetara ụkpụrụ nke dialectic Taoist na Ryôri nke monasteries Japanese Zen iji dee akwụkwọ ya "Macrobiotic Zen".
Ihe anyị nwere ike ikwu bụ na nkuzi nke Georges Ohsawa bụ ihe dị mkpa na njedebe nke iyi dị iche iche nke Ọwụwa Anyanwụ na Ebe Ọdịda Anyanwụ gbakọtara n'okpuru ọkọlọtọ macrobiotic ruo ọtụtụ puku afọ na ihe niile nwere isi ebumnuche kachasị mma bụ mmelite nke ọnọdụ ụmụ mmadụ na ogologo ndụ.
Mmadu di na onwu nwụrụ anwụ, ma ọ gbanwee ma ọ ga-apụ n'anya
Iji pụọ na ọgbaghara a, naanị ụzọ ị ga - esi pụta bụ ịmata OBURRUE ANY TR BUE eziokwu: ihe e kere eke sitere na enweghị njedebe nke na-etinye nwa oge na ụwa a n'oge a. Anyị họọrọ oge nsogbu ndị a n'ihi na ha na-enye anyị ohere atụghị anya itolite ma bido. Anyị chọrọ isonye na nnukwu njem a, nnukwu nzọ ụkwụ maka ụmụ mmadụ. Ndi mmadu ga-agbanwe mgbe mmadu obula gbanwere, mgbe nwoke obula tufuru usoro egwu ochie ya. na ịgba mgba. Ọ bụ oge siri ike nye ọtụtụ n'ime anyị. Ọchịchị anyị, ego na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-apụ n'anya na ndụ anyị, mgbanwe ndị ahụ dịkwa ngwa ngwa. Anyị kwesịrị inwe obi ike karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Karịa mgbe ọ bụla anyị chọrọ amamihe nke ọdịdị Chineke anyị.
Ọ bụ ibi ndụ macrobiotic nke na-enye anyị ohere ịkọwapụta ọdịdị Chineke anyị nke ọma, ma tụkwasị obi na nghọta anyị. Maka onwe anyị, maka mmekọrịta anyị na ụmụ mmadụ ibe anyị, maka okike, maka ụwa nke a bụ ihe kachasị mma.
Tozọ nke mgbanwe bụ site na ịhapụ usoro nkwenkwe anyị
Anyị nwere ike ichefu ihe niile anyị mụtara ma mepụta ezigbo ndụ anyị na-atụ anya ya. Anyị na-arụ ahụ anyị na nghọta anyị kwa ụbọchị. Nri na - emeputa obara nke na - aga ụbụrụ ebe echiche na - amalite.
Ogo nke echiche dabere n'ịdị mma nke ọbara. Echiche ndị a na-eme mkpebi ikpebi ọnọdụ nke ndụ anyị, onye anyị na-adọta na onye anyị dọtara. Ọ bụrụ na ndụ anyị adịghị anyị mma, anyị enweghị ike ịta ya ụta maka ndị mụrụ anyị, mkpụrụ ndụ ihe nketa anyị, usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke juru ebe nile ma ọ bụ onye anyị na ya bi na ndụ ma ọ bụ ihe ọjọọ. Anyị na-aghọrọ mkpụrụ kpọmkwem nke ihe anyị kụrụ. Echiche na-eme ka a mata ihe ndị bụ eziokwu. Ihe omuma a amagoro na sayensi ebe ihe omuma na akowa na onye nlere nwere ihe omumu na ihe anahu.
O doro anya na, na nke a, echiche ahụ na-egosipụta onwe ya na ihe omume anụ ahụ. A na-eji usoro a mgbe niile na ọkwa amaghị ihe. Anyị na-adọta ihe anyị na-atụ egwu na ihe anyị chọrọ. Echiche bụ ime ya n'ọkwa mara.
Ihe ngosi nke mmadu ugbu a bu enweghi ike imeghari ya dika otu ma merie ikpe nke uche nke di ebe nile, ma karisia n'ogo nke ndi ndoro-ndoro ochichi anyi, ndi oru ahia anyi na ndi mmadu no n'Ebe Ọdịda Anyanwụ ebe ihe niile na-akpali anyị ichebara ihe niile echiche. anyị, na nke mbụ na-enye mkpa ọdịdị anya.
Anyị ga-abụ ndị kacha mma, nke kachasị mma, ANY to kwesịrị ịbụ ndị mbụ, ANY to ga-emeri. ANY are bụ etiti eluigwe na ala. N'ime ụwa a enwere ike ịbụ naanị atụrụ na anụ ọhịa wolf, ọ nweghị ohere fọdụrụ maka ụzọ ọzọ. Mmụta na-amalite na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma na-aga n'ihu na ụlọ akwụkwọ, kọleji na mahadum, ebe ọ dị mkpa ịnọ n'etiti ndị mbụ. Ọsọ a na-aga n'ihu n'oge ọrụ ọkachamara na ọbụna n'ime ndụ ezinụlọ. Ọ ghọrọ omenala ịlụ ọgụ ike. Ọ baghị uru ma onye meriri, n’ihi na ndị mmeri na ndị emeriri na-ahụ onwe ha n’otu steeti: afọ ojuju. Site n'echiche a ka amụrụ oke ịhụnanya nke onwe nke na-ezo n'azụ iwe anyị, ekworo anyị, mpako anyị, nchegbu anyị na ịda mba anyị.
Ọ na-adị anyị ka anyị agaghị enwe ọ happyụ ma ọ bụrụ na anyị anaghị elekọta onwe anyị na mbu, mana nke ahụ na-eme: ka anyị na-elebara onwe anyị anya, afọ ojuju anyị adịghị. Ọ bụrụ na anyị merie, anyị na-eche ọnọdụ a dị ka nwa oge ma na-achọkarị karịa ma ọ bụrụ na anyị emeghị nke ọma, mgbe ahụ anyị nwere ọmịiko na onwe anyị ma gbaba na ọrụ nke onye a na-ata ahụhụ, na-ezo n'okpuru ọmịiko pụtara ìhè maka njigide, maka asịrị, na asịrị, ụzọ ọzọ iji "gbuo" onye agbata obi gị.
Ọnọdụ a bụ ihe atụ zuru oke nke ikpe ziri ezi, ebe e mesiri ike na nchịkọta ihe onwunwe na afọ ojuju ozugbo. Movementsfọdụ mmegharị maka udo ma ọ bụ nkesa ka mma nke akụ na ụba na-egosipụta mkpebi mmetụta uche na mgbe ụfọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana ọ gafere nke ahụ.
Onweghi onye matara ịgwọ ụdịrị ọnọdụ a. Nanị ihe ngwọta ga-abụ ịkwụsị ịnọgidesi ike n'ụzọ nke gosipụtara na ọ nweghị isi ma tụgharịa gaa na ihe na-arụ ọrụ: ngụkọta metamorphosis bụ naanị ụzọ meghere mmadụ.
Ọ bụghị site n'ịlụso ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị nke ọha mmadụ ugbu a ọgụ ka anyị ga-enweta nsonaazụ, kama site n'iji ezi obi na-agakwuru ha, site na ịkọwara ha ụkpụrụ nke yin-yology sayensị nke asụsụ dia-yang .
Ọtụtụ mgbe mgbe ịmalite na macrobiotics anyị ga-eche ọtụtụ nsogbu ihu, ndị isi bụ:
★ Mmegide kpụ ọkụ n'ọnụ sitere n'aka ndị gbara ya gburugburu na ụdị nri a dị ọhụrụ.
★ Mkparị, ịkwa emo, okwu mkparị.
★ Ọpụpụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
★ Ọjụjụ usoro nlekọta ahụike jụrụ.
★ Destabilizing nkà ihe ọmụma.
★ Enweghị ezigbo ndị obodo iji gbanwee ahụmahụ.
Ka anyị kee ụwa ọhụrụ
Mepụta “ụwa ọhụrụ” abụghị naanị site na nri.
Macrobiotics n'onwe ya ga-agbanwe ma gbanwee. Mgbe macrobiotics gosipụtara ọzọ na ụwa nke oge a, ọ gafere site na ntanetị. Mgbanwe nke nri niile anyị nwere na macrobiotics nwere bụ usoro yang. N'otu oge ahụ, ikuku centrifugal malitere: anyị malitere iwepụ usoro anyị. Site na i rie macrobiotics, anyị asị NO na ihe niile anyị mụtara.
Site na ịnakwere ibi ndụ macrobiotic, anyị amụtala iri otu ụdị nri: ọkọlọtọ macrobiotic, nke dị mma maka ndị mbido. Mana ọ bụrụ na anyị anọgideghị na gburugburu ọzọ centrifugal, anyị nọ n'ihe egwu nke enweghị ike ịgagharị, nri a nke lekọtara anyị nwere ike ịdị egwu. Ndị niile na-eme macrobiotics ruo ọtụtụ afọ amatala na isi ike a adịghị mma: kama ịnakwere nri macrobiotic dị mma na mbụ wee, na-esote, na-ewepu nri iji gaa n'ihu na mgbanwe anyị na ọkwa ime mmụọ. , anyị anọgidewo na-edozi ụzọ anyị si eri nri: mana enweghị nri zuru oke. Ihe niile dị mma nwa oge.
O yiri ka macrobiotics n'ụzọ ụfọdụ na-anwa ịnọnyere usoro nkwenkwe a. Kama, ka anyị jiri nghọta anyị họrọ nri. Ọ bụrụ na anyị nwere afọ ojuju itinye akwụkwọ ọgwụ, ọbụlagodi n'ụzọ zuru oke, ọ na-eguzo na ọkwa nke ikpe, ọ na-aghọ nkwenkwe, ọchịchị ọzọ:
a ga-akpọ ya ka ọ laa.
Ndụ macrobiotic bụ usoro evolushọn na-aga n'ihu. Onweghi ihe edobere, onweghi ihe edoziri. Mgbe anyi tufuchara usoro omenaala na nke ezi n’ulo, anyi kwesiri itufu “macrobiotic pattern” ma wepu onwe anyi ikpe banyere onwe anyi na ndi ozo. Mgbasa nke ihe omimi nke ibi ndu n'uwa dum gabigara site na ihunanya, karie nri: anyi nile di iche, ma anyi bu otu. Maka nke a, anyị chọrọ ibe anyị, anyị ga na-ekwurita okwu, ọ dị mkpa ka anyị gwa ibe anyị okwu, hụ ibe anyị n’anya.
Ishụnanya abughi oru nke uche, ihunanya bu ike di ocha nke gbasaa na njedebe, o bu ikpe ma obu oke uche. Anyị niile jikọtara dịka mmadụ na anyị niile jikọọ na mmegharị macrobiotic. Ndị na-eche na ha nwere ike ikpe ndị ọzọ ikpe ezighi ezi, anyị chọrọ ndị anyị na-ekwenyeghị, n'ihi na ha na-akwado ma na-enye anyị ohere ịgbakwunye ntụgharị ọhụrụ na gburugburu a na njedebe.
Ihe mgbaru ọsọ nke macrobiotics
“Ebumnuche nke macrobiotics bụ iji gwọọ mkpụrụ obi, nke ọgwụgwọ anụ ahụ enweghị ike ịme. Ọ bụ naanị mgbe ọrụ mkpụrụ obi gachara ka anyị ga-amata nri kwesịrị ekwesị. Ọ bụ mkpụrụ obi na-agwọ ọrịa. Ọ bụghị macrobiotics na-agwọ, kama nghọta nghọta dialectical. Ọ bụghị osikapa ma ọ bụ gomasio na-agwọ, kama uche gị na-enye gị uche. Mgbe ahụ ọgwụgwọ ahụ ga-abịarute ụbọchị ole na ole ”.
G. Ohsawa Thedị macrobiotics bụ ihe zuru ụwa ọnụ ma kwesịrị ime ka ọha mmadụ nwee ike ịchụso ihe mgbaru ọsọ ise:
1. Nọgide na-enwe ahụ ike gị na nke ezinụlọ gị
2. Chebe ihe nketa nke ọgbọ dị n'ihu
3. Chebe gburugburu ụwa
4. Nye nri zuru oke na qualitative maka mmadụ nile.
5. Gbalite n'otu n'otu na otu.
Peoplefọdụ ndị na-eche na ha nwere ike ichere maka ọdachi ikpeazụ mgbe ha na-eri ngwaahịa dị mma ma na-edozi ahụ na ha ga-enwe ike ịgbanahụ ya. Ọ bụ ọrụ anyị inye aka wulite ụwa ọhụrụ ugbu a. Macrobiotics, ọ bụrụ na ọ na-enye ngwọta dị mma, bụ naanị akụkụ nke usoro ahụ. Enwere otu netwọkụ nke ihe ọma, nghọta na mmesapụ aka n'ụwa ugbu a bụ ndị na-agbachi nkịtị na-arụ ọrụ maka ọbịbịa nke "ọgbọ ọhụrụ" a. Enwere ọtụtụ ụzọ ime mmụọ, ọ dịghị mkpa nke anyị ga-aga, ha niile na-eduga ebe ụwa chọrọ ịga.
Ihe doro anya nke macrobiotics bụ na ọ na-eburu n'uche akụkụ anụ ahụ anyị, ọ na-ejikọta na anyị bụ mmadụ na, n'ihi ya, anyị na-eri nri kwa ụbọchị. Nri anyị na-ekpebi otú ọbara anyị ga-adị. Site n'ịgbanwe ihe (ọbara), anyị na-agbanwe uche. Naanị ichebara ihe echiche bụ ihe okike. Yabụ ka anyị leba anya na "ọrụ" ndị anyị kere n'ụzọ dị otu a.
Ngwá ọgwụ bụ nhọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Thiswa a nke obscurantism nke bidoro 3000 afọ gara aga na-abịa na njedebe ma oge ọhụụ ọhụụ na-abịa. Na Feng Shui ịgụ kpakpando, dabere na ki nke kpakpando 9, ọ na-atụ aro ka "ịgbaso ebili mmiri ahụ." Ọ bụ otu ihe n'ihe gbasara akara aka nke mmadụ, ịgbaso ebili mmiri pụtara iso usoro a mmeghari ohuru. Ndị na-agba ịnyịnya ọhụrụ a agaghị enwe nsogbu kpamkpam nke obi abụọ, mana maka ndị na-arapara n'ahụ ụlọ ochie, oge ndị siri ike nọ na mmiri.
Iji wulite ụwa nke udo, ọ dịghị mkpa ịgbanwe usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke iwu dị ugbu a. Anyị ga-emerịrị ihe ndị a site na ịgbanye isi ihe kpatara nke butere mmadụ iji guzobe usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achịkwa kpamkpam. Ihe kpatara nsogbu nke ọha mmadụ ji dị na nri, tupu ọ pụta ìhè n'uche.
"Ruo mgbe e nwere ebe a na-egbu anụ, a ga-enwe agha".
Gbanwe tupu oge gị bụ ịgba chaa chaa, nke ahụ na-egosi na ị ga-agbanwe n'agbanyeghị na enweghi akara mgbaàmà siri ike, dabere na nghọta na enyo; gbanwee mgbe onye ọ bụla na-adụ ọdụ ka o jidesie nkwenkwe ochie ike. Dịka ọmụmaatụ, mgbe enweghị mmanụ n'ụwa, mgbe ahụ onye ọ bụla ga-ekwenye ịgbanwe omume ha, ibi ndụ dị iche, gbanwee ka ọ bụrụ onye na-agba ịnyịnya ma ọ bụ skater. Mana igbanwe ogologo oge tupu mmanụ agbaala bụ nsonaazụ nke ịgba chaa chaa. Anyị na-echekwa ego mmanụ, anyị na-amụta ibi ndụ na-enweghị ya ma anyị na-agba onye ọ bụla ume ime otu ihe ahụ. Dabere na nghọta anyị na ụfọdụ enyo enyo n'ihi na anyị na-ahụ gburugburu anyị (enweghị ego nke ọgwụ, ọrịa ara ehi na-akpata, nsogbu ihu igwe, nsogbu akụ na ụba,) anyị kpebiri ịgbanwe ụzọ ndụ anyị ogologo oge tupu onye ọ bụla ọzọ. ndị mmadụ anaghị eche banyere ya.
Onweghịkwa onye ga-agwa anyị ma ọdịnihu ga-egosi anyị na anyị ziri ezi.
Anyị so na ndị ọsụ ụzọ oge ọhụụ. Ọrụ anyị dị ukwuu ma gafere oke mkpa anyị n'otu n'otu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọtụtụ mgbe ihe kpatara anyị ji gbanwee nri anyị bụ onye ọ bụla, n'oge na-adịghị anya, ha ga-emetụta ndị gbara anyị gburugburu na emesịa na ọha mmadụ. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ otú ọ kwesịrị. N'eziokwu, ọ̀ ga-eme ka ị mara ihe nzuzo dị otú ahụ magburu onwe ya?
Iri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri iji nwee obi ụtọ nwere ike bụrụ ihe nkoropụ ma nwedịrị ike ime ka ịchọ naanị ọdịmma onwe anyị sie ike ma mee ka anyị nwekwuo obi ụtọ. Iji kwekọọ, mgbanwe nke nri kwesịrị ịgụnye mgbanwe na ụzọ anyị si eche echiche na omume anyị.
Macrobiotic Zen, ma ọ bụ Art Rejuvenation na Longevity
2 ọhụrụ site na .11,00 XNUMX
5 ejiri site na 5,49
Zụta € 11,00
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 15, 2021 12:26
Akwụkwọ ọkọwa okwu n'Ịntanet iji sụgharịa ihe odide dị na French
GMOs, kwupụta njikere ụwa - Akwụkwọ nyocha (2008)
Nkwenye - Didier Drogba
Isnye na-atụ ụjọ ikweta na ndị farans ojii?
Ozizi nile nke temple - Vol 3 (PDF)